Isamsung iya kuhlaziya i-Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge kwi-Android Nougat | Iindaba zeGajethi
Isamsung iya kuhlaziya i-Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge kwi-Android Nougat
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikwazise ngokusungulwa kwe-beta yokuqala ye-Android Nougat ye-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge, iiterminal zokuba ngaphambi kokuphela konyaka bafumane ingxelo yokugqibela yale nguqulelo intsha ye-Android. Kodwa kubonakala ukuba ayingabo bodwa, kuba ngokwento esiyifundileyo eSamMobile, inkampani yaseKorea iceba ukuhlaziya iiterminal ezazisungulayo kunyaka ophelileyo ngaphakathi kwinqanaba eliphezulu lenkampani, i-Galaxy S6, i-S6 Edge kunye ne-S6 Edge +, uhlaziyo olungayi kubakho kude kube nguJanuwari wonyaka ozayo, ngethamsanqa.
Isamsung ibisoloko ingumbandela wokugxekwa bobabini abasebenzisi kunye nemithombo yeendaba xa uhlaziya izixhobo zakho, nokuba kungenxa yokuhamba kancinci okanye ngokushiya iitheminali ezishiyiweyo kutshintsho lokuqala, iitheminali eziphezulu ezihambelana ngokugqibeleleyo nohlobo lwe-Android lwalo mzuzu.
Inkampani yaseKorea iyaqhubeka ke ukuzama ukuphucula umfanekiso wayo emva kweengxaki ebenazo ngokusungulwa okungaphumelelanga kweGalaxy Note 7Isiphelo esingasasazi esona sizathu sibangele uqhushumbo. Okwangoku okucacileyo kukuba isiphelo sayo senkwenkwezi sangoku siya kufumana uhlaziyo kwi-Android 7.0 Nougat kwinyanga ezayo, ngelixa imodeli yangaphambili iyakwenza njalo ngoJanuwari.
UGoogle ubhengeze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukuba IPixel entsha iya kuqinisekiswa iminyaka emibini yokuhlaziywaIxesha elifutshane kakhulu kwisiphelo esinokuthi senze umsebenzi waso ngokugqibeleleyo kwintengiso iminyaka emithathu okanye emine. I-Apple yenye yeenkampani ezihlonipha kakhulu uhlaziyo lweetheminali zayo. I-iPhone 4s, i-terminal eneminyaka emihlanu kwintengiso, ibe sesona sixhobo sishiyekileyo ngaphandle kokufumana uguqulelo lweshumi lwe-iOS 10. Kule minyaka mihlanu ibifumana lonke uhlaziyo inkampani esekwe eCupertino ibisungulwa, nangona kunjalo uninzi lwemisebenzi emitsha ibingafumaneki kwesi sigxina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Isamsung iya kuhlaziya i-Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge kwi-Android Nougat
Molo, ndivela eGuatemala, ndinomphetho we-s7, uhlaziyo olucwangcisiweyo kule ndawo .. enkosi
I-Huawei Mate 9 Pro enescreen esigobileyo inokubonwa kwimifanekiso emininzi evuzayo